आज पनि घट्यो चन्द्रागिरिको शेयर, प्रतिकित्तामूल्य कति ? - नेपालबहस
आज पनि घट्यो चन्द्रागिरिको शेयर, प्रतिकित्तामूल्य कति ?
| १६:४८:४५ मा प्रकाशित
३ जेठ, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से सामान्य अंकले बढेको छ । सामान्य अंकले बढेको बजारमा १० कम्पनीको सर्किट लेबलमा कारोबार भएको हो । यस दिन चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनीको शेयरमूल्यमा गिरावट आएको छ ।
यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्यमा १३ रुपैयाँले गिरावट आएको हो । यस दिन चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनीको शेयर १३ रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता १८२५ रुपैयाँमा रहेको छ ।
लामो समय सकारात्मक सर्किट लाग्दै कम्पनीको शेयरमूल्य तीन हजार पुगेको हो । पछिल्ला दिनहरुमा कम्पनीको शेयरमा लगातार गिरावट आएको छ ।
हालै कम्पनीले प्रकासन गरेको वित्तीय विवरणले कम्पनीको वित्तीय अवस्था कम्जोर देखिन्छ। अभै आगामी केहि वर्ष कम्पनीले लाभांश समेत वितरण गर्न नसक्ने देखिन्छ । जसले गर्दा कम्पनीको शेयरमा क्रेता कम भई बिक्रीकर्ता धेरै देखिएका छन् ।
चन्द्रागिरि हिल्सको बढोत्तरीः शेयरमा उच्च माग, करिब ९ पुग्यो मूल्य ३ महिना पहिले
चन्द्रागिरिको आईपीओ भर्नेलाई केवलकारमा २५ प्रतिशत छुट ५ महिना पहिले
चन्द्रागिरि हिल्सले ल्यायो फेस्टिभ अफर ९ महिना पहिले
कोपा अमेरिका २०२१ पनि डिशहोममा प्रत्यक्ष हेर्न पाइने ४० मिनेट पहिले
मुख्यमन्त्री पोख्रेलले बहुमतसहित विश्वासको मत पाए २ दिन पहिले
मनसुन शुरु भएसँगै विपद व्यवस्थापनको पूर्वतयारी १ हप्ता पहिले
संविधान संशोधन अस्वीकार गरेपछि सरकारमा बसिरहनुको औचित्य छैन १ वर्ष पहिले
पुनरावलोकन मुद्धा अगाडि बढाउने वा नबढाउनेबारे निर्णय लिदै सर्वोच्च ३ महिना पहिले
एघार दिनदेखि तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको काम ठप्प २ वर्ष पहिले